स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन र अनलाइन राजस्व निर्धारण तथा संकलन प्रणाली सम्बन्धि अभिमुखीकरण
चन्द्रमणि भट्टराई | २०७७-०९-२० | १५८९ २
प्रयोगमा आएका सफ्टवेयरबाट प्रभावकारी परिणाम देखिन थालेका छन्, प्रयोगमा क्षमता बढाउँदै जाऔं — मेयर शाक्य
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एउटै ठाउँमा राखेर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन र अनलाइन राजस्व निर्धारण तथा संकलन प्रणाली सम्बन्धि अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिरहेको छ । मानव सशाधन महाशाखाले आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा वडाध्यक्ष, सडा सचिव र लेखापाललाई सहभागी गराइएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई छुट्टै समूहमा राख्दा बुझाइमा एकरुपता नआउने भएकोले विषयको साझा बुझाइका लागि सँगै राखेर अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको हो ।
अनलाइन राजस्व प्रणाली गएको असोज १ गतेदेखि वडा २६ बाट सञ्चालन गर्न थालिएको हो । त्यसपछिका ३ चरणमा गरेर सबै वडाबाट यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विभागका प्रमुख डा. अधिकारीका अनुसार पुष २० गतेसम्ममा यो प्रणालीबाट १ अर्व ४ करोड ३७ लाख ४४ हजार ४ हजार ४११ रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ ।
महानगरलाई कर तिर्ने करीब २ लाख करदाता हुनुहुन्छ । उहाँहरुमध्ये अहिलेसम्म ३५ हजार करदाताको विवरण कम्प्युटरमा प्रवेश गराइसकिएको छ । बाँकी करदाताको विवरण चैत्रमसान्तभित्र प्रवेश गराइसक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।
अभिमुखीकरणमा वडाध्यक्षहरुले जनशक्ति र उपकरण पर्याप्त नभएको, सफ्टवेयरका बारेमा पूर्ण जानकारी नहुँदा विवरण राख्न समय लाग्ने गरेको, सम्पत्ति करलगायत कर लेखाङ्कन गर्ने क्रममा द्विविधा भएकोजस्ता आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । त्यसै गरी करदाता शिक्षामा कार्यक्रम बढाउनु पर्ने उहाँहरुको जोड थियो ।
हातले हिसाब गर्दा र कम्प्युटरमा आउने हिसाबको अङ्क फरक हुनु, इन्टरनेट ढिला हुनु जस्ता समस्या अहिलेका साझा समस्या हुन् । प्रणाली थालनी भइसकेपछि सबै कर्मचारीले कम्प्युटर जान्नै पर्ने अवस्था आएको छ ।
राजस्व विभागले राजस्व निर्धारण तथा सञ्चालन प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गराउने, जनशक्ति परिचालन र तालिम तथा उपकरणको क्रमशः विस्तार गरिरहेको बताएको छ । सिकाइको क्रममा रहेकाले पूर्ण भन्न मिल्दैन तर राजस्व संकलनलाई अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिनेमा आत्मविश्वाश बढेको छ । विभागका प्रमुख डा. अधिकारीले आशा गर्नुभयो ।
महानगरका विद्युतीय प्रणालीका बारेमा सेवाग्राहीको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ । सेवा लिएका सेवाग्राही भन्नुहुन्छ — महानगरले राम्रो कामको शुरुवात् गरेछ । यसलाई राम्रो र दिगो बनाउँदै अरु सेवालाई पनि यस्तै बनाउनुपर्छ । हामीले भोट दिएको काम लागेछ । अब घरबाटै कर तिर्ने प्रणाली ल्याओस् । कर असुलीमा पारदर्शिता होस् । महानगरले बल्ल ठीक काम गरेछ । यी आवाजहरु प्रत्यक्ष संवाद, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त भएका हुन् ।
महानगरले धेरै पक्षमा सुधारका काम गरेको छ तर लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीबाट अझ सहयोग आवश्यक छ — मेयर शाक्य Previous Post
काठमाडौं महानगर र मेलम्ची नगरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना Next Post